☘️ NEŽA Studio ☘️ Hamba ☘️ Ukukhwela ibhayisekile
Indlu yethu ikufutshane neBled lake (900m/15 min) kunye neekhilomitha ezi-2 ukuya kwiziko leBled, kufutshane neentaba, iimbono ezintle. Indlu entsha, yanamhlanje kunye nefenitshala ngokupheleleyo enenkqubo yokufudumeza ephantsi. Le ndawo ithokomeleyo iza nendawo ekhuselekileyo yasimahla yokumisa izithuthi esitalatweni kunye nepatio entle yabucala enetafile nezitulo, ilungele isidlo sakusasa sakusasa, ukuhlala kunye nokutya.
I-studio appartment ehlaziywe ngokupheleleyo (i-24 square metres), kunye nekhitshi (elixhotyiswe ngezixhobo eziqhelekileyo kunye nezixhobo, kuquka i-toaster, i-heater yamanzi ...) ibhedi (200 * 160 cm), i-TV eflethi, i-sofa, igumbi lokuhlambela, inkqubo yokufudumeza ephantsi. . Ngaphandle, phambi komnyango omkhulu unetafile yakho yeGadi kunye nesitulo esisetiwe ngewiew emangalisayo ezintabeni.
I-Studio flat inokuhlala abantu aba-2.
4.94 · Izimvo eziyi-269
Kufuphi nendlu yindlu yezinyosi, apho unokufumana khona ubusi obugqwesileyo kunye nezinye iimveliso zezinyosi, kunye nefama enetshizi eqhelekileyo kunye nezinye iimveliso ezenziwe ekhaya.
Sihlala kwiflethi kumgangatho olandelayo kwaye sifumaneka ngalo lonke ixesha.
Sisibini esinomoya wokubuk’ iindwendwe esilungele ukukunceda ngezimvo zohambo kwaye sikukhokele kwindawo engqonge iBled ngokunjalo. Njengesikhokelo sebhayisekile yeentaba u-Attila (umyeni kaJana) unokukuthatha, ngokucwangciswa kwangaphambili, ngokuqinisekileyo, kwiindawo ezimangalisayo zokukhwela i-panoramic kunye neebhayisikili zeentaba okanye ukuhamba nawe ukukhwela kwindawo yokukhwela i-Bohinjska Bela imizuzu eyi-10 ngemoto. Phofu ke, siyakuvuyela ukwabelana nabanye ngolonwabo esiphila kulo kule ndawo intle kangaka.
Ungalibazisi ukwazisa njengoko unayo nayiphi na imibuzo. Kuya kuba luvuyo lwethu ukukunika iimpendulo.
Sisibini esinomoya wokubuk’ iindwendwe esilungele ukukunceda ngezimvo zohambo kwaye sikukhokele k…